Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - Part 2
Dad badan waxay bilaabaan in ay ka walaacsan ilka u caddaa sida dhallinyarada. riyadan si fudud noqon kartaa mid dhab ah, inkastoo haddii aad rabto in aad. Waxaad heli kartaa ilkaha cad by barashada farsamooyinka ugu wanaagsan halkaas oo socda talo wanaagsan. Macluumaadka halkan lagu soo bandhigay ayaa kuu sheegi doona sida ilko whitest suurto gal.
Ka fogow sigaarka iska, kafeega, iyo khamri. Mid kasta oo ka mid ah waxaa ku jira kiimiko in u hoggaansamaan iyo discolor ilkaha. Haddii aad tahay qof diidan in la yareeyo ama la baabi'iyo isticmaalkaaga kasta oo ka mid ah, markaa waa in aad la cadayashada ilkaha ka dib marka aad u baabbi'iyo. Waxaa hadda jira burush farta mini la heli karo si loo heli karo nuurka u ah hadal haynta in aagga ilkaha. Waxaa laga yaabaa in kale a haan in isagoo caday aad wakhti buuxa leh. roughness burush ayaa waxa uu ilkaha nadiif ah.
TALO! Cabitaannada sida khamri ah cas, qaxwada iyo soda waa in la wada baabbi'iyey lala galaas oo biyo ah. sharaabka qaarkood ay yihiin kuwo aad si degdeg ah u discolor ilkaha, oo iyaga si joogto ah la cabo waxay keeni kartaa xayd.
Waxa ugu horeeya ee aad samayn lahaydeen in la caddeeyo mid ka mid ah barnaamijka ilkaha waxaa loo hubiyo in aad hesho nadiifinta xirfadeed. Hel ilkaha xirfad nadiifiyaa lix bilood kasta oo aad ballan soo socda halka xafiiska nadiifinta aad hadda.
Waxaad u baahan tahay in aad u taxaddar marka cunaya ama cabaya ka dib markii ilkaha Nuuri. Ilkaha ahaan u badan tahay inuu jebiyo ka dib markii ay la soo Nuuri. Isku day inaad wadid cad ee cuntooyinka in ay leeyihiin midab madow ka dib markii aad u caddayn ilkaha. Coffee, tusaale ahaan, waa tusaale wanaagsan oo ah cabitaan laga yaabo jebiyo-keenaya in ilkaha noqon doonaa nugul.
TALO! Isticmaal strawberries sida ilkaha dabiiciga ah whitener. The xeryahooda dabiiciga ah laga helo ee strawberries caddeeya aanu u caddayn doonaa ilkaha oo aan la isticmaalayo kiimikada.
Ilkaha u caddayn
ilkaha Your laga yaabaa in dareen ah in wax soo saarka la caddeeyo. Waxaa laga yaabaa in aan weligiis yeelin, laakiin waxa ay weli xanuun badan. Jooji isticmaalka sheyga oo taga arkaan dhakhtarka ilkaha sida ugu dhaqsaha badan. Waxa uu ku talinaynaa yaabaa nooc ka mid ah wax soo saarka oo aan jid in saameyn doonaa ilkaha.
TALO! Akhri tilmaamaha ee alaabta la caddeeyo guriga gabi ahaanba ka hor inta aadan bilaabin daawaynta. this Sameynta kaliya ka dhigi doonaa in cirridka in ay bararaan, afka u noqon cun, iyo ilkaha in la waxyeello.
Miraha waa hab fiican oo dabiici ah in ay u caddayn whiteners ilkaha. tusaalooyin lamaane A of miraha aad u fiican oo u caddayn karin ilkahoodu yihiin liinta iyo liin. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa diirka ah orange ka dhanka ah dusha sare ee ilkaha.
Luqluqasho freshens aad neefta iyo dishaa jeermiska keeni kara yiridka; Si kastaba ha ahaatee, foomamka qaar ka mid ah dawo luqluqasho discolor kartaa ilkaha. Isticmaal dawo luqluqasho oo aan adag iyo in la hubiyo, ma aha midab dhalaalaya.
TALO! Hab la yaab leh si ay u caddayn ilkaha xoogaa waa iyada oo la isticmaalayo strawberries dabiiciga ah. Dadka ayaa loo isticmaalaa strawberries sida whitener guri sanado badan.
cadayga caadiga ah iyo la caddeeyo cadayga aadan kala duwan badan. Iska ilaali dhacaya alaabooyinka qaali ah oo aan shaqayn. Waxaad si fudud loo doonaa intey lacag.
Waxaad samayn kartaa adiga oo cadayga caddeeyo gaar ah leh qaar ka mid ah haydarojiin iyo dubista soda. U ogolow koollada si gelin dusha ka furan ee ilkaha muddo shan ilaa toban daqiiqo ka hor cadayashada. Ha cadaydo ilkahaaga Xumeeyaan, waxay yeelan doontaa gacan ku diiqayaa ciridka.
TALO! Ka taxaddar iyo isticmaali ilkaha waxyaabaha la caddeeyo sida saxda ah sida lagu faray. Ilkaha caddeeyo waxyaabaha yeelan karaan saamayn xoqe ama waxyeello on dhaldhalaalka iliga, Xabkaha iyo xataa dareemayaasha.
Mid ka mid ah habka si aad u hesho ilkaha caddaan sii cad waa in la qotomiyey nadiifinta ilkaha oo joogto ah.
Hab habboon in la iftiimin dhoolla waa inay si fudud u badali cadayga aad hadda la cadayga ah caddeeyo. cadayga Tani waxaa si gaar ah loo habayn si loo soo saaro Wasaqda iyo huurada sida ay whitens. In ka badan muddo dheer, waxaad arki doontaa ilkaha caddaan iyo Wasaqda dhimay.
TALO! Xusuusnow in taaj waa walax ka duwan ilkaha dabiiciga ah, oo aadan ka jawaabin whiteners ilkaha. Caddeeyo ilkaha keeni kartaa bandhigga midabka sinnayn haddii taaj aad loo arki karaa marka aad ilka.
Ka fogow cabitaanka ilko-xayd haddii aad rabto in aad iyaga u noqon ilkaha cad. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah cabitaanka kafeega, qaxwada iyo shaaha dhaqanka. Haddii aad rabto in aad ka fogaato xayd sida aad cabto, kuwaas oo, tixgelin biyo cabaya dhexeeya kabbashooyin sharaabka aad si loo yareeyo xayd.
Jooji caddeeyo ilkaha haddii daaweynta sababaa xanuun ama dareenka. waxyaabaha la caddeeyo mararka qaarkood waxay kordhin kartaa dareenka oo waxaan ka dhigi caabuq. Haddii ay taasi dhacdo, joojiso isticmaalka whitener isla markiiba, oo la hadal dhakhtarkaaga ilkaha oo ku saabsan wax soo saarka ah oo kala duwan in uu noqon doono haboon ilkaha xasaasi ah.
TALO! cabitaanka Chase oo keeni Wasaqda biyo. Marka aad qabtid biyo qaar ka mid ah ka dib markii dareere mugdi ah (kafeega, shaah, pop, iwm.
Cun tufaax ah in si deg deg ah iftiimin ilkaha ama aad qabto muuqaalka kore ee ilkaha caddaan. cuntooyinka iyo khudaarta callaaliska leeyihiin tayo ah hadal haynta in kaa caawin kara inaad nadiifiso ilkahaaga aan haysan si ay khasaaro badan ku dhaldhalaalka.
Waydii dhakhtarkaaga ilkaha for gel ah in loo isticmaali karaa guriga si uu kaaga caawiyo caddeeya aanu u caddayn ilkahaaga. Habka Tani waxay ku lug diyaarinta afka ah in ka dheregsan yahay gel. Waxaad ku xidhaan, waayo xaddi gaar ah oo waqti habeen kasta laba ama saddex toddobaad. ilkaha Your laga yaabaa in sida ugu badan sideed midabo kala caddaan doonaa iyadoo la isticmaalayo habkan.
TALO! Booqashada ilkaha waa lagama maarmaan u ah helitaanka ilkaha caddaan. Dhisidda nadiifinta loo qorsheeyey galay noloshaada fure u tahay ilkaha caddaan.
Jooji isticmaalka wax daaweyn caddeeyo haddii aad dareento dareen in ilkaha noqdaan xasaasi ah. Waa in aad la tashato talo dhakhtarkaaga ilkaha ee yaabaa tan laguu keenaya waxyeello dhabta ah si ay ilkaha. Waa in aad la hadasho dhakhtarka ilkaha ogaado fursadaha u wanaagsan ee aad marka ay timaado in la caddeeyo ilkaha.
Caday ilkaha maalin kasta waa habka ugu fiican si ay u sii caafimaad, oo iyaga difaaco godadka, iyo xayd coroge. Isticmaalka daawada ilkaha ah la caddeeyo waa hab fiican si loo horumariyo muuqaalka kore ee ilkaha. Waxaa jira fursado badan, sidaa sameeyaan cilmi qaar ka mid ah, iyo waxa ay kaa caawin doona inaad u hesho daawada cadayga ee ugu fiican caddeeyo baahidaada.
TALO! Waxaad noqon doontaa kalsooni badan oo ku saabsan dhoolla haddii aad tahay kalsooni badan oo ku saabsan neefta. Licking aad oo timir ah (marka hore dhaq gacmahaaga!) kuu sheegi karaa haddii aad neefta waa xun ama aan.
Caday ilkaha joogto ah haddii aad leedahay smile.Food weyn oo cabitaan dhisi karaa ilkaha iyo discolor ama u jebiyo muddo ka dib. Waxaad aan la walwalsan doonaa midab of ilkaha haddii aad sii wado si joogto ah caadiga ah si joogto ah ilko-cadayashada.
Xusuusnow muhiimadda ay leedahay floss aad si joogto ah. Findhicilashada helo burburka ilkaha gudaha iyo dagaalama huurada, kaas oo keena midab. Waa in aad ilkahaaga siin findhicilashada ka dib kasta oo hadhuudh ah; xasawda waa la qaadi karo oo ku filan in aad ku qaadi karaan marka aad guriga ka maqan cuni. Ka hor inta aadan seexan habeenkii, waxaa aad u muhiim ah in ilkaha dhexdooda, si aad uga takhalusi karo bakteeriyada xun ee laga yaabo in la joogo ee afkaaga.
TALO! Iska ilaali kafeega, shaah, koollooyinka iyo cabitaanada kale ee midab madow ah si aad ilkahooda whitest. Mid kasta oo ka cabitaanka waxay keeni doonaa ilkaha si uu u noqdo discolored.
Cab cabitaano cad oo keliya, waayo, maalmo yar ka dib marka aad helay ilkaha Nuuri.
Goynta hoos on cabitaanka, sida pop soda ama khamri, kaa caawin doona inaad ilkaha caddaan. Maxaa yeelay, soda iyo khamri u yeeli karaan ilkaha, aad isaga ilaalin karto dhoola cad by cabo yar ee labada. Haddii waa inaad iyaga leeyihiin, in kastoo, ilkaha cadaydaan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka dib markii iyaga wax baabbi'iya. Tani waxay iyaga siin doonaa waqti yar inuu jebiyo ilkaha aad u xun.
TALO! Si aad u hesho ilkaha caddaan, waxaad isticmaali kartaa jilif geedka walnut ah. Khilaaf this on ilkaha si fiican iyaga nadiifiyaa oo iyaga ka dhigaa caddaan.
Tani waa hab ah in kharash badan, laakiin waxa aad siinaysaa natiijooyin deg deg ah.
Ku adkeeya tiro badan oo cuntooyinka caanaha laga sameeyo. Waxyaalaha caanaha leeyihiin macaadin, sida calcium, in dhawri doonaa ilkaha raadinaya caafimaad. dhaldhalaalka ee ilkaha noqon doonaan xoog iyo ka yar u nugul in ay midab. Marka aad ka mid ah noocyada cuntada, kuwaas oo aad cunto aad naftaada siin dhoola caddaan.
TALO! Caday ilkaha la baking soda iyo haydarojiin paste inay u caddayn. Labada waxyaabaha caadi ahaan loo isticmaalo in la caddeeyo cadeyga, oo dadka intooda badan ku hayn iyaga guryahooda.
Cun khudaarta iyo miraha in ay yihiin texture buunshada in matali karta sida scrubber a dabiiciga ah ee ilkaha. A dhowr tusaale oo cuntooyinka si ay u eegaan waxa ka mid ah tufaax, tufaax, qajaar iyo karootada. Isticmaal ilkaha oo dhan si aad u calaliyo kor cunto callaaliska si aad u hesho saamaynta ugu badan.
Ha cabin sigaar sigarka qoriga ah ama sigaarka haddii aad u caawin kartaa. Kuwani labadaba waxaa lagu yaqaan in keeni midab ah oo ilkaha. Joojinta sigaarku caawin doonaa hortago hurdi jirriqsi. Waxaa jira daawooyin wax ku ool ah ayaa kaa caawin kara in aad joojiso sigaarka, haddii aad u tagto dhakhtar. Waa in aad leedahay talo habboon iyo taageero.
Dadka intooda badan waxay jeclaan lahaa ilko caddaan. Dhibaatada waxa ay tahay in dadka badankiisu ma waxay aaminsan yihiin in ay u caddayn karin ilkahooda, si ay marnaba xitaa isku dayin. Ka dib markii Talooyin iyo tabaha ka this article idin siin doonaa ilkaha si qurux badan oo caddaan ku jiro waqti aad u yar.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:59 AM
Categories: Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn Tags: ilkaha cad, Caddeeyo Talooyin Ilkaha, Caddeeyo Talooyin Ilkaha waxaad isku dayi kartaa Out Maanta!
Saar Your Ilkaha Uskag Oo midab Iyadoo Talooyin Kuwani